KALITAON’NY VOKATRA : Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso
Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso na black eyes tato anatin’ny folo taona. 20 000 taonina monja no naondrana tamin’iny taona lasa iny, raha 40 000 taonina izany folo taona lasa izay. 22 mai 2020
Nisy ny atrikasa hanatsarana ny sehatr’asa natao tao amin’ny Antenimieran’ny varotra tamin’ ny herinandro lasa teo, niarahan’ireo mpisehatra sy ny minisitera misahana ny varotra ary ny Faritra Boeny... Marihina moa fa vokatra fitaratra eto Boeny ny lojy mainty maso, ary anisany mampiditra vola vahiny betsaka. Amin’ny maha tompon’andraikitra voalohany ny Faritra amin’ny fampandrosoana dia efa nanao tantsoroka ity seha-pihariana ity hatrany ny faritra hatrizay ka hatramin’izao. Mandalo olana ny seha-pihariana, hoy ny talen’ny fampandrosoana ao amin’ny Faritra Marcellin satria miharatsy ny kalitaon’ny ambezo ka mihena ny vokatra. Miakatra ihany koa ny tahan’ny fanafody simika anaty vokatra ka misy ireo vokatra no averin’ny mpanafatra. Misy ihany koa ireo mpijirika manimba ny tsena...
Nametraka paikady ireo mpisehatra matihanina sy ny Faritra ka anisan’izany ny fifehezana ny varotra fanafody izay maniry toy ny anana. Nametrahana manam-pahaizana manokana amin’ny "pesticide" eny ifotony hanampy ny mpamboly amin’ny fampiasana ireo fanafody famonoana bibikely. Eo amin’ny ambezo kosa dia misy ny fiaraha-miasa amin’ny Fofifa sy ny sehatra tsy miankina hanatsarana izany. Napetraka sy nohamafisina kosa ny fambolena ifanarahana, ka ifanarahan’ny mpamboly mialoha amin’ny olona handray ny vokatra ny fanampiana (ambezo, zezika sy fanafody....) sy ny vidiny handraisana azy.
Ho an’ny minisitera sy ny mpiara-miombona antoka kosa dia fanatsarana ny tontolon’ny fambolena ho matihanina ary hametraka azy ho seha-pihariana enti-mandroso.
Zotra amina lalam-pirenena miisa fito no niverina amin’ny laoniny FITATERANA AN-TANETY (234) 16 septembre 2020 Vazaha iray voatifitra, voaroba ny vola tamina kitapo NIREFOTRA NY BASY TANY TOLIARA (191) 16 septembre 2020 Lehilahy tra-tehaky ny Polisy teo am-pandrobana fiara ANTSAHAMANITRA (130) 16 septembre 2020 Iray volana vao hita ilay zazavavy varira 12 taona FAKANA AN-KERINY (122) 18 septembre 2020 Rarahan’ny jiolahy fampatoriana ny sakafon’ireo olona horobaina SAMBAVA (121) 18 septembre 2020 Olona marary saina nianika “pylone” nitondra herinaratra ANOSIZATO (116) 16 septembre 2020